တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ မူလတန်းသင်ရိုးမှာပါဝင်လာခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် – ရှအေလငျး
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတာ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ သမီး…လက်ရှိ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး တာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်နေသူဖြစ်ပါတယ်…
ဒါ့အပြင်သူမဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်….
အဲဒီလို မြန်မာကသာမက ကမ္ဘာကပါသိတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အကြောင်းကို တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ မူလတန်းသင်ရိုးစာအုပ်မှာ ထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်…
အဲဒီ မူလတန်းသင်ရိုးထဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဘဝနောက်ခံသမိုင်းကြောင်းကို ကိုရီးယားကလေးငယ်လေးတွေ စိတ်ဝင်စား နားလည်လွယ်စေဖို့အတွက် ရုပ်ပြကာတွန်းတွေနဲ့ သရုပ်ဖော်ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်….
ဓနုဖြူမှာ နာမည်ကြီး ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီး The Lady ဇာတ်ကားထဲမှာပါဝင်တဲ့အခန်းတစ်ခန်းဖြစ်တဲ့ သေနတ်နဲ့ချိန်ထားတဲ့ စစ်သားတွေရှေ့မှာ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ မားမားမတ်မတ်နဲ့ သေနတ်ပြောင်းဝရှေ့တိုးဝင်ရပ် ခဲ့တဲ့ ပုံရိပ်ကိုလည်း ထည့်သွင်းရေးဆွဲ ဖော်ပြထားပါသေးတယ်…
အဲဒီစာအုပ်ကို မြန်မာဘာသာနဲ့ပြန်ဆိုထားတဲ့ စာအုပ်လည်းရှိပြီး တစ်ချို့ အကြောင်းအရာတွေကို ရေးသားဖော်ပြထားတဲ့ပုံစံတွေဟာ အနည်းငယ် အားနည်းနေသေးပေမယ့် ကလေးသူငယ်တွေအတွက်တော့ စိတ်ဝင်တစားဖတ်ရှုပြီး နားလည်လွယ်စေတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်အဖြစ် ချီးကျူးနေကြပါတယ်..
Photo Source : m.post.naver & Myo Thant Mg
ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျဆိုတာ မွနျမာ့လှတျလပျရေးဖခငျ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးရဲ့ သမီး…လကျရှိ နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာနရဲ့ ပွညျထောငျစုဝနျကွီး တာဝနျတှကေို ထမျးဆောငျနသေူဖွဈပါတယျ…
ဒါ့အပွငျသူမဟာ ငွိမျးခမျြးရေးနိုဘယျဆုရှငျတဈဦးလညျး ဖွဈပါတယျ….
အဲဒီလို မွနျမာကသာမက ကမ်ဘာကပါသိတဲ့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျအကွောငျးကို တောငျကိုရီးယားနိုငျငံရဲ့ မူလတနျးသငျရိုးစာအုပျမှာ ထညျ့သှငျးဖျောပွလိုကျပွီ ဖွဈပါတယျ…
အဲဒီ မူလတနျးသငျရိုးထဲမှာ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျရဲ့ ဘဝနောကျခံသမိုငျးကွောငျးကို ကိုရီးယားကလေးငယျလေးတှေ စိတျဝငျစား နားလညျလှယျစဖေို့အတှကျ ရုပျပွကာတှနျးတှနေဲ့ သရုပျဖျောထားတာကိုတှရေ့မှာဖွဈပါတယျ….
ဓနုဖွူမှာ နာမညျကွီး ဖွဈရပျတဈခုဖွဈခဲ့ပွီး The Lady ဇာတျကားထဲမှာပါဝငျတဲ့အခနျးတဈခနျးဖွဈတဲ့ သနေတျနဲ့ခြိနျထားတဲ့ စဈသားတှရှေမှေ့ာ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ မားမားမတျမတျနဲ့ သနေတျပွောငျးဝရှတေို့းဝငျရပျ ခဲ့တဲ့ ပုံရိပျကိုလညျး ထညျ့သှငျးရေးဆှဲ ဖျောပွထားပါသေးတယျ…
အဲဒီစာအုပျကို မွနျမာဘာသာနဲ့ပွနျဆိုထားတဲ့ စာအုပျလညျးရှိပွီး တဈခြို့ အကွောငျးအရာတှကေို ရေးသားဖျောပွထားတဲ့ပုံစံတှဟော အနညျးငယျ အားနညျးနသေေးပမေယျ့ ကလေးသူငယျတှအေတှကျတော့ စိတျဝငျတစားဖတျရှုပွီး နားလညျလှယျစတေဲ့ စာအုပျတဈအုပျအဖွဈ ခြီးကြူးနကွေပါတယျ..
မြန်မာ့ ကိုယ်စားပြုမော်ဒယ်အဖြစ် အလုပ်တွေလုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့ ဟိန်းမင်းသူ
လေထုညစ်ညမ်းသည့် ဘန်ကောက်တွင် နှာခေါင်းစည်း ပြတ်လပ်သွား၍ ဘရာစီယာကို သုံးနေရသည့်...
မူးယစ်ဆေးနဲ့ ..နာမည်ကြီး တောင်ကြီးမှ …လူမိုက် ၉ ဦးအဖွဲ့ကို...